बिटकोइन : सात वर्षअघि डेढ लाख पर्ने कुरा अहिले कसरी एक अर्बको भयो ?
काठमाडौं, १४ मंसिर — भर्चुअल मुद्रा बिटकोइनका बारेमा निरन्तर चेतावनीहरू जारी भएका छन् । केहीले यसको कुनै भविष्य छैन भनिरहेतापनि यसको मूल्य बढेको बढ्यै छ ।
सन् २०१७ को ११ महिनामा एक बिटकोइनको मूल्य लगभग १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
एक वर्षअघि बिटकोइनको भाउ ७५३ डलर थियो तर यसमा लगभग १३ सय प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ ।
युरोपेली मुलुक लक्जम्बर्गमा भएको बिटकोइन एक्सचेन्जका अनुसार, बिटकोइनले यस वर्ष आफ्नो यात्रा एक हजार डलरबाट शुरु गरेको थियो ।
सन् २००९ मा शुरु गरिएको बिटकोइनको दाममा भारी उतारचढाव आइरहन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने मुद्राको अस्तित्व हुने अनि त्यसको भाउ दिनदिनै बढ्दै जाने कसरी सम्भव हुन्छ ? जानकारहरूका लागि यो प्रश्नको जवाफमा अर्को प्रश्न पनि लुकेको छ ः बिटकोइनमा लगानी गर्ने मानिस को हो ?
सर्च फर्म अटोनोमस नेक्स्टले यसलाई पत्ता लगाउन खोज्यो । यसका पछाडि हेज फन्ड्सको हात रहेको उसको दाबी छ । हेन फन्ड्सले शेयर किन्छ र फाइदामा बेच्छ । यी फन्डहरूले बिटकोइनमा पनि यसै गर्छन् ।
अटोनोमस नेक्स्टका अनुसार, यस वर्ष बिटकोइनको खरिदबिक्रीमा हेज फन्ड्सको हिस्सा ३० बाट बढेर १३० प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यसै कारणले बिटकोइनले अत्यधिक फाइदा गरेको हो । संसारमा सबभन्दा धेरै फाइदामा रहेका कम्पनीहरू डिज्नी, आईबीएम र म्याक्डोनल्ड्स त यसको नजिक पनि छैनन् ।
वित्त विश्लषक बिलेलोले सात वर्षअघि कसैले बिटकोइनमा १० हजार डलर लगानी गरेको भए आज त्यसको मूल्य बढेर ११० करोड डलर पुगेको बताएका छन् ।
बिटकोइन एक भर्चुअल मुद्रा हो र त्यसमा कुनै सरकारी नियन्त्रण छैन । यस मुद्रालाई कुनै पनि बैंकले जारी गरेको होइन । यो कुनै पनि देशको मुद्रा नभएकोले यसमा कर पनि लाग्दैन । बिटकोइन गोप्य करेन्सी हो र यसलाई
सरकारबाट लुकाएर राख्न सकिन्छ ।
यसलाई संसारमा कतै पनि सिधै किन्न र बेच्न सकिन्छ ।
शुरुवातमा कम्युटरमा धेरै जटिल कार्य गरेपछि यो क्रिप्टोकरेन्सी कमाइन्थ्यो ।
प्रत्येक बिटकोइन कम्युटरमा एक फाइल हो जसलाई स्मार्टफोन वा कम्प्युटरको डिजिटल वालेटमा राखिन्छ । प्रत्येक कारोबारलाई एक सूचीमा चढाइन्छ र त्यसलाई ब्लकचेन भनिन्छ । यो करेन्सी कोडमा भएकाले यसलाई जफत गर्न पनि सकिन्न अनि नष्ट गर्न पनि सकिन्न ।
बिटकोइन हासिल गर्ने तीन मुख्य तरिका छन् : तिनलाई असली पैसाले किन्ने, उत्पादन र सेवाको साटो बिटकोइनमा भुक्तानी गरेर अनि आफ्नै भर्चुअल मुद्रा भएको नयाँ कम्पनीको माध्यमले ।
बिटकोइन मूल्यवान हुन्छ किनकि मानिसहरू असली सामान र सेवाको बदलामा यसलाई किन्न इच्छुक छन् । नगद दिएर पनि मानिस बिटकोइन किन्न हिचकिचाउँदैनन् ।
सन् २००९ मा सातोशी नाकामोतो नामक जापानी समूहले संसारसामु बिटकोइन पेश गरेको थियो ।
संसारमा अहिले ७०० भन्दा बढी भर्चुअल मुद्रा इन्टरनेटबाट सञ्चालित भइरहेका छन् । नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले दिनदिनै भर्चुअल मुद्रा लिएर आइरहेका छन् ।
भर्चुअल मुद्राको प्रमुख सिद्धान्त भनेको यसको कारोबार संसारको कुनै पनि कुनामा बसीबसी गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट कनेक्सन हुनुप–यो । लेनदेन एक्सचेन्ज फर्ममार्फत हुन्छ ।
बिटकोइनमा गिरावट आउन सक्छ त ?
जवाफ सजिलो छैन । हेज फन्डहरूले अचानक पैसा फिर्ता लिए भने गिरावट आउन सक्छ ।
द न्युयोर्क टाइम्समा एक लेखमा उल्लेखित छ, ‘एक ठूलो लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा खिच्दैछ भनी खबर लिक भयो भने हल्लाखल्ला मच्चिन्छ अनि अन्य निवेशकले पनि आफ्नो रकम निकाल्न सक्छन् ।’
अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो बैंक जेपी मोर्गन चेजका सीईओ जेमी डिमोन र प्रसिद्ध लगानीकर्ता वारेन बफेले बिटकोइनलाई फर्जी भनिसकेका छन् । यो गोल्डकोस्टजस्तो पिरामिड स्कीम भएको उनीहरूको दाबी छ ।